MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: အရပ်သားပြည်သူများကို ဗမာစစ်တပ် ပစ်ခတ်
ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်း၊ ကားမိုင်းမြို့ ဘက်မှ ဖါးကန့်ဘက်သို့ ချီတက်လာသော ခလရ (၁၃) စစ်ကြောင်းတစ်ကြာင်းသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့က နန့်ယား (Nam Ya) ကျေးရွာ အတွင်းရောက်ရှိစဉ် လမ်းဘေး ၀ဲ၊ ယာ သို့ သေနတ်များပစ်ခတ် ၀င် ရောက်ခြဲ့ခင်းကြောင့် အပစ်မဲ့ ရွာသား (၄) ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
(၁) ဦးဇိန်ဟန်ဘောက်နော် အသက် (၅၂) နှစ်
(၂) ဒေါ်အေး အသက် (၄၆) နှစ်
(၃) ဒေါ်ဖေါ်ယမ်ကော့ အသက် (၇၀) နှစ်
(၄) မောင်ကျော်မင်းထွေး အသက် (၁၃) နှစ်
(သတ္တမတန်းကျောင်းသား) တို့မှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ၎င်းနန့်ယားကျေးရွာသား ဦးနော်တောင်အိမ်ဝင်းအတွင်းမှ ၀က် (၃၀) ပိဿာခန့်ဝက်တစ်ကောင်ကိုလည်း သတ်ဖြတ် ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ အတောအတွင်း KIA တပ်ရင်း (၆) တည်ရှိသောနေရာ ကံဆီး ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ဖို့ မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ ညွန် ကြားထားပြီဖြစ်၍လူအင်အား၊ ရိက္ခာ၊ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များ ကိုေ န့စဉ်နှင့်အမျှ ပို့ဆောင်နေကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။
Burmese infantry unit (13) fired innocent civilians in Nam Ya, which is between kamaing and Hpa Kant road on 18th November according to the KIA front-line officer report. While the Burmese soldiers were shooting to everywhere in the village, four civilians were injured. They were, Zinghan Bawk Naw (52) years old, Daw Aye (46) years old, Hpauyam Kaw (70) years old and Mg Kyaw Min Htwe (13) years old student. Moreover, the cruel Burmese soldiers killed and carried (30) Vis of pig from villager Naw Tawng house. The Northern military head quarter has already instructed their troops to make offensive action in December to the KIA’s (6th) battalion area of Kan Si, thus they send everyday rations, many troops, heavy weapons to Hpa Kant area.
at 11/21/2012 11:45:00 PM